माओवादी द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका मेरा बुबाको हत्या भयो। तर, न्याय पाएनौं। हामीले जस्तो मानसिक र सामाजिक तनाव कसैले पनि भोग्न नपरोस् भनेर न्यायको लडाइँ जारी राखेका हौं।
के हो पृथ्वीको औसत तापक्रम एक डिग्री बढ्नुको अर्थ? के होला असर?
भावी पुस्तालाई सन्तुलित जलवायु सहितको स्वस्थ पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न तापक्रम वृद्धि घटाउने दिशामा वर्तमान पुस्ताले विवेक खर्चिन र त्याग देखाउन जरुरी छ।
डाक्टरी पेशा र देश छाड्न बाध्य पार्ने त्यो घटना‍‍‌
अस्पतालमा घटेको एउटा घटनाले युवा चिकित्सकलाई पेशासँगै देश नै छोड्न बाध्य पार्‍यो।
संस्कृतिको समग्र ‘पृथकता’ अर्को सौम्य शक्ति बौद्ध धर्मलाई भारतले आफ्नो सौम्य शक्तिको अस्त्र बनाउँदै गर्दा, चीनले सगरमाथाको प्रवर्द्धन गर्दा र वीर गोर्खालीको अर्थलाई फेरि केलाउनुपर्दा के यी शक्ति सधैं पर्याप्त छन् त भन्ने प्रश्न गरी नेपालले अन्य ठाउँमा पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्‍नुपर्ने देखिन्छ।
राजा महेन्द्रले अमेरिकामा शिकार खेल्दाको शुल्क तिर्नै बाँकी कोडिआकका मेयर पिट डेभियु भन्छन्, “यहाँ सबैले (राजा महेन्द्रका लागि) आफूलाई टकटक्याए। तर, राजाले बिल तिरेनन्।” होटल क्याप्टेन कुक समेट्ने हाइकेल होेटल्सका महाप्रबन्धक हान्स बेकरवेर्थ ठाडै भन्छन्, “हामीलाई ठगियो।”
धेरै काठमाडौंबासीलाई लागेको छ–संघीयता चल्दैन!
संसद्‌मा बोल्दै अधिकारीले सरकारले सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को आडमा सरकार चलाएको बताएका छन्।
किन बढ्यो बाढी-पहिरो, कसरी गर्न सकिन्छ विपद् न्यूनीकरण?
प्रकृतिसँगको सन्तुलन विनाको विकास निर्माणले विपद्को जोखिम बढेको छ। विपद् जोखिम कम गर्न सरकार र समाजको सहकार्य जरुरी छ।